စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေဖို့ နည်းလမ်း ၅ သွယ် – Gentleman Magazine
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဘဝထဲမှာ တိုးလာတာနဲ့ အမျှ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒိတော့ စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်အောင် ရှောင်နိုင်ရင် ရှောင်၊ မရှောင်နိုင်ရင်လဲ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျော့နိုင်ဖို့ အကြုံပြုချက် ၅ ချက်ကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။
၁. စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်း မှတ်တမ်းရေးပါ။ အဲဒါဟာ သင့်ကို ဘယ်အရာက စိတ်ဖိစီးစေတာလဲ ဆိုတာနဲ့ သင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းနေလဲဆိုတာကို ခြေရာခံမိစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု တစ်ခါဖြစ်တိုင်း အောက်က မေးခွန်း ငါးခုကို ရေးချပြီး ပြန်ဖြေကြည့်ပါ။ အဲဒါဆို သင် စိတ်ဖိစီးတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
က. ဘာက စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတာလို့ ထင်လဲ??
ခ. သင့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ??
ဂ. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရော ဘယ်လို ခံစားရလဲ??
ဃ. စိတ်ဖိစီးမှုကို သင် ဘယ်လို တုံ့ပြန်လိုက်လဲ??
င. စိတ်ဖိစီးတဲ့ အချိန်မှာ သင် ဘာလုပ်ရင် ပိုနေလို့ ကောင်းသွားလဲ??
၂. အခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ နည်းလမ်းလေးခုကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။ အသုံးချပါ။
က. စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတဲ့ အရာကို ရှောင်ကျဉ်ပါ ( အငြင်းစကား များများပြောပါ)
ခ. စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေသူကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားပါ ( စကားလွှဲပြောတာမျိုးပါ)
ဂ. ပြောင်းလဲမရရင် စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေသူနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
င. စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေတာကို လုံးဝ ရှောင်လွှဲမရရင် လက်ခံပြီး စိတ်လျှော့လိုက်ပါ။
၃. သင့်ကိုယ်သင် အကောင်းမြင်စကားပြန်ပြောပါ။ “ငါဒါမျိုး အရင်ကလဲ ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒိတုန်းကလဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်သားပဲ။” ဆိုတာလိုမျိုးပါ။ တစ်ချိန်မှာ တစ်ဆင့်ချင်းပဲ အလုပ်လုပ်ပါ။ အဆိုးမြင်စကားကို ရှောင်ပါ။ အမုန်းတရားတွေကို မတွေးပါနဲ့။ အလုပ်ကို မမုန်းပါနဲ့။
၄. စိတ်ဆရာဝန်တွေက သူတို့ဆီလာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ၇၅ ကနေ ၉၀ ရာနှုန်းထိကို ပေးလေ့ရှိတဲ့ ကုထုံးဟာ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ စိတ်တင်းမာနေတာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်မှန်စေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
၅. အသက်ဝဝ ရှုခြင်းနဲ့ တရားထိုင်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ပါးစေဖို့ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
လိုအပ်ရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေကို အကူအညီတောင်းပါ။ အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ပါ။
က. အလုပ်၊ ကျောင်းမှာ သိသိသာသာ အရည်အသွေး ကျဆင်းလာရင်
ခ. အရမ်း စိတ်ညစ်ညူးတာ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်လာရင်
ဂ. နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို မဖြည့်ဆည်းနိုင် ဖြစ်လာရင်
ဃ. ကြောက်လန့်မှုတွေ အလိုလို ဖြစ်လာရင်
င. အစားအသောက် အရမ်းစားချင်လာပြီး ကိုယ့်ဘာသာ မဝပဲ ဝတယ်လို့ ထင်နေရင်
စ. အိပ်စက်ခြင်း၊ အစားစားခြင်း အလေ့အကျင့်တွေ ပြောင်းလဲလာရင်
ဆ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုတွေပါ ဖြစ်လာရင်
ဇ. ကိုယ့်ဘာသာ သတ်သေချင်တာ၊ တခြားသူတွေကို ထိခိုက်စေချင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာရင်
ဈ. ကိုယ့်ဘာသာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူတွေ လုပ်မိနေရင် ( အရက်သောက်၊ ဆေးချ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား အပြင်းမောင်းတာမျိုးပါ)
ည. အမြဲတမ်း စိတ်အလိုမကျ ခံစားနေရရင်
( လူတစ်ယောက်ယောက် သူ့ဘာသာသူ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တာ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ သိရင် မြင်ရင် အရေးပေါ်ဋ္ဌာနကို ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားပါ။ မြန်မာမှာဆို ၁၉၉ ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်း မီးသတ်စခန်း ဖုန်းနံပါတ်တွေလဲ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ )
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
စိတျဖိစီးမှု ပွလြေော့စဖေို့ နညျးလမျး ၅ သှယျ
စိတျဖိစီးမှုတှေ ဘဝထဲမှာ တိုးလာတာနဲ့ အမြှ ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈလာမှာပါ။ အဲဒိတော့ စိတျဖိစီးမှု မဖွဈအောငျ ရှောငျနိုငျရငျ ရှောငျ၊ မရှောငျနိုငျရငျလဲ ထိနျးခြုပျထားနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုကို ဖွလြေော့နိုငျဖို့ အကွုံပွုခကျြ ၅ ခကျြကို အောကျမှာ ပေးထားပါတယျ။ ကွိုးစားကွညျ့လိုကျပါ။
၁. စိတျဖိစီးမှုအကွောငျး မှတျတမျးရေးပါ။ အဲဒါဟာ သငျ့ကို ဘယျအရာက စိတျဖိစီးစတောလဲ ဆိုတာနဲ့ သငျ ဘယျလို ဖွရှေငျးနလေဲဆိုတာကို ခွရောခံမိစပေါတယျ။ စိတျဖိစီးမှု တဈခါဖွဈတိုငျး အောကျက မေးခှနျး ငါးခုကို ရေးခပြွီး ပွနျဖွကွေညျ့ပါ။ အဲဒါဆို သငျ စိတျဖိစီးတာကို ထိနျးခြုပျဖို့ နညျးလမျးတှေ ရှာတှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
က. ဘာက စိတျဖိစီးမှုကိုဖွဈစတောလို့ ထငျလဲ??
ခ. သငျ့ ကိုယျခန်ဓာမှာ ဘယျလိုခံစားရလဲ??
ဂ. စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာရော ဘယျလို ခံစားရလဲ??
ဃ. စိတျဖိစီးမှုကို သငျ ဘယျလို တုံ့ပွနျလိုကျလဲ??
င. စိတျဖိစီးတဲ့ အခြိနျမှာ သငျ ဘာလုပျရငျ ပိုနလေို့ ကောငျးသှားလဲ??
၂. အခွအေနကေိုပွောငျးလဲစတေဲ့ နညျးလမျးလေးခုကို အောကျမှာ ပေးထားပါတယျ။ အသုံးခပြါ။
က. စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစတေဲ့ အရာကို ရှောငျကဉျြပါ ( အငွငျးစကား မြားမြားပွောပါ)
ခ. စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစသေူကို ပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားပါ ( စကားလှဲပွောတာမြိုးပါ)
ဂ. ပွောငျးလဲမရရငျ စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစသေူနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
င. စိတျဖိစီးမှု ဖွဈစတောကို လုံးဝ ရှောငျလှဲမရရငျ လကျခံပွီး စိတျလြှော့လိုကျပါ။
၃. သငျ့ကိုယျသငျ အကောငျးမွငျစကားပွနျပွောပါ။ “ငါဒါမြိုး အရငျကလဲ ကွုံဖူးပါတယျ။ အဲဒိတုနျးကလဲ အဆငျပွအေောငျ လုပျနိုငျသားပဲ။” ဆိုတာလိုမြိုးပါ။ တဈခြိနျမှာ တဈဆငျ့ခငျြးပဲ အလုပျလုပျပါ။ အဆိုးမွငျစကားကို ရှောငျပါ။ အမုနျးတရားတှကေို မတှေးပါနဲ့။ အလုပျကို မမုနျးပါနဲ့။
၄. စိတျဆရာဝနျတှကေ သူတို့ဆီလာတဲ့ စိတျဖိစီးမှုဝဒေနာရှငျတှရေဲ့ ၇၅ ကနေ ၉၀ ရာနှုနျးထိကို ပေးလရှေိ့တဲ့ ကုထုံးဟာ ကနျြးမာအောငျ နထေိုငျဖို့ပါ။ ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ စိတျတငျးမာနတောကို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ အိပျခြိနျမှနျစပွေီး စိတျတညျငွိမျစပေါတယျ။
၅. အသကျဝဝ ရှုခွငျးနဲ့ တရားထိုငျခွငျးက စိတျဖိစီးမှု လြော့ပါးစဖေို့ အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
လိုအပျရငျ ကြှမျးကငျြသူတှကေို အကူအညီတောငျးပါ။ အောကျပါ လက်ခဏာတှေ ပျေါပေါကျလာရငျ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျလိုကျပါ။
က. အလုပျ၊ ကြောငျးမှာ သိသိသာသာ အရညျအသှေး ကဆြငျးလာရငျ
ခ. အရမျး စိတျညဈညူးတာ ခဏခဏ ဖွဈတတျလာရငျ
ဂ. နစေ့ဉျဘဝရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို မဖွညျ့ဆညျးနိုငျ ဖွဈလာရငျ
ဃ. ကွောကျလနျ့မှုတှေ အလိုလို ဖွဈလာရငျ
င. အစားအသောကျ အရမျးစားခငျြလာပွီး ကိုယျ့ဘာသာ မဝပဲ ဝတယျလို့ ထငျနရေငျ
စ. အိပျစကျခွငျး၊ အစားစားခွငျး အလအေ့ကငျြ့တှေ ပွောငျးလဲလာရငျ
ဆ. ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဖောကျပွနျမှုတှပေါ ဖွဈလာရငျ
ဇ. ကိုယျ့ဘာသာ သတျသခေငျြတာ၊ တခွားသူတှကေို ထိခိုကျစခေငျြတာမြိုးတှေ ဖွဈလာရငျ
ဈ. ကိုယျ့ဘာသာ အန်တရာယျဖွဈစတေဲ့ အပွုအမူတှေ လုပျမိနရေငျ ( အရကျသောကျ၊ ဆေးခြ၊ ဆိုငျကယျ၊ ကား အပွငျးမောငျးတာမြိုးပါ)
ည. အမွဲတမျး စိတျအလိုမကြ ခံစားနရေရငျ
( လူတဈယောကျယောကျ သူ့ဘာသာသူ အန်တရာယျ ဖွဈစနေိုငျတာ တဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုတာ သိရငျ မွငျရငျ အရေးပျေါဋ်ဌာနကို ခကျြခွငျး အကွောငျးကွားပါ။ မွနျမာမှာဆို ၁၉၉ ပါ။ သကျဆိုငျရာ နယျမွရေဲစခနျး မီးသတျစခနျး ဖုနျးနံပါတျတှလေဲ မှတျထားသငျ့ပါတယျ။ )
စိတျဖိစီးမှုဟာ သငျ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ အမွနျဆုံး ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။
Previous: ယောက်ျားတွေမကြိုက်တဲ့ အချက်များ
Next: အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်မှာ လုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှား(၁၅)